New York dia tanàna any Etazonia, ny anarany ofisialy amin'ny teny anglisy dia New York City mba tsy hifangaro amin'ny faritany mizakatena ny New York, any Etazonia.
Ny isam-ponin'i New York dia 8.336.697. Ny tananan-dehibeny dia ilay anisan'ny ngeza indrindra ao a Etazonia.
Tamin'ny 2005, ny isa-mponin'i New York Be dia nisy 26 tapitrisa (miaraka amin'ny tanànan'i New Jersey). Manana faritanàna dimy i New York.
1.1 Tamin'ny andro ny Holandey
1.2 Tamin'ny andro ny Anglisy
1.3 Tamin'ny andro Amerikana
1.3.1 Ny ady ho an'ny fahaleovantena
5.1 Lahatsoratra ilaina
Nanomboka tamin'ny taonjato faha 16 ny tantarany (fahatogavan'ny Eoropeanina), nandalo teo amin'ny helo-drano misy an'i New York ankehitriny i Giovanni da Verazzano tamin'ny 1524, Ny foko Lenape ny nipetraka teo tamin'izay fotoana izany. Tsy nijanona ela teo i Verazzano ary nomeny anarana hoe Nouvelle Angoulême ilay tany.
I Henry Hudson ny nanomboka nitsidika ilay nosy tamin'ny 1609 ho an'ny Companie des Indes Occidentales.
Tamin'ny andro ny HolandeyHanova
Ny fipetrahan'ny mpanjanatan'ny Eoropeanina dia nanomboka tamina fanamboarana zanatany manokana ho an'ny fivarotana hoditra, Ny Holandey ny namorona ilay zanatany any antrimon'ny nosy ny Manhattan, Vao noforonona Nieuwe Amsterdam tamin'ny 1614.
Tamin'ny 1626 ilay lahiben'ilay zanatany : i Peter Minuit dia nividy ilay nosy ny Manhattan 60 florin fotsiny (24 $).
Tamin'ny 11 Mey 1647, lasa governoran'ny Nieuwe Amsterdam i Pieter Stuyvesant , lasa niharatsy ny fivarotana tamin'ny teratany. Ho an'ny Ortôdoksia relojiosy i Stuyvesant, ary nanomboka afintiny ny fisotroana alkôla. Teo arinan'io, nanomboka tsy tian'ny olona mipetraka.
Tamin'ny Marsa 1664 i Charles II D'Angleterre nanomehan'ny Nieuwe Amsterdam ho an'ny zandriny, Duc ny York, Tamin'io fotoana io, nakan'io zanatany ny anglisy tamin'ny 1664, Ary lasa New York ny anaran'ilay tanàna tamin'ny 1664 hatramizao.
Tamin'ny andro ny AnglisyHanova
Lasa New York ny Nieuwe Amsterdam. Ny colonel Richard Nicolls lasa governora anglisy voalohany an'ilay tanàna. Fa lasan'ny Provinces-Unies ny New York, ary nivadika New Orange izy tamin'ny 1673.
Lasa tanàna New York tamin'ny ady Anglo-Hôlandezy faha 3.
Tamin'ny andro AmerikanaHanova
Ny ady ho an'ny fahaleovantenaHanova
Nanomehan'i George Washington zo ilay tanàna tamin'ny 1776, ary nihetiny tao amin'ilay tanàna ilay déclaration d'indépandance mba herim-po an'ny olony. Fa voakisakan'ny miaramila anglisy nihetin'ny Willian Howe ny olona amerikana tamin'ny volana Aogositra hatramin'ny Volana Oktobra satria vitsy laotra.
Lasan'ny Anglisy teo izany New York tamin'ny 1776 hatramin'ny 1783. Ary tamin'ny 1783 ilay tanàna vao nahazo fahaleovantena otran'ny Etazonia. Niverina any New York avio ny tafika amerikana tamin'ny 4 Desambra 1783. Ary lasa renivohitran'ny Etazonia i New York tamin'ny 1789.
New York, tanànan'ny skyscrapers sy aspirine, ilay tanàna mahaliana sy mampihetsi-po amin'ny fotoana rehetra izay fantatray fa hahatratra anao raha vao tonga ianao. Miaraka amin'ny traikefa tsy tambo isaina hanandrana sy toerana hotsidihina tsara indrindra any New York, na sambany voalohany ao an-tanàna na misy vitsivitsy ianao dia tsy maintsy tadidinao fa ny Big Apple dia manandevo.
New York dia tanàna manambatra ny maoderina skyscrapers sy ny fiainana frenetic amin'ny fiainana noho ny fahalalan'ny mozea manan-danja indrindra eran'izao tontolo izao. Na dia tsy afaka mirehareha tantara momba ny kolontsaina an'arivony taonina tahaka ny Old Continent aza ny Big Apple, ny tranom-bakoka New York toa ny MET dia manana sangan'asa tsy manam-paharoa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ary tsy misy hialona azy amin'ny zava-dehibe hafa.
Na dia eo aza ny Central Park ao amin'ny zaridainan'i New York malaza, ny Big Apple dia manana zaridainam-panjakana hafa izay ahafahanao mirenireny, miala sasatra ary miala voly amin'ny fialambolin'ny tanàna. Raha atambatra, ny NYC dia rakotra 14% eny amin'ny habakabaka maitso.
Raha manontany tena ianao hoe inona no hatao any New York amin'ny hariva, dia tsy maintsy fantatrao fa miresaka tanàna iray tena velona isika, ka tsy mifantoka amin'ny faritra iray ny fialamboly, fa nozaraina amin'ny faritra maro: West Chelsea, Lower East Side, Atsinanana Village, Greenwich Village, ary Meatpacking District dia azo ampiasaina avokoa ny safidy rehetra amin'ny tara tara. Misy disko, klioba misy mozika mivantana (hip-hop, rock, jazz, fanahy), klioba hatsikana, sy ny maro hafa.
Fampahalalana mikasika ny toe-tanin'i New York (Central Park), 1981-2010 normals
Ambony indrindra °F (°C)
Elanelana avo °F (°C)
39.1 42.4 50.5 62.0 71.6 80.1 84.9 83.4 76.0 64.6 54.6 43.8
ambany °F (°C)
26.9 28.9 35.2 44.8 54.0 63.6 68.9 67.9 60.8 50.0 41.6 32.0
Ambany indrindra °F (°C)
Latsak'orana inches (mm)
Elanelan'ny isan'ny andro misy orana milatsaka (≥ 0.01 in)
Elanelan'ny andro milatsaka oram-panala (≥ 0.1 in)
4.1 2.9 1.8 .3 0 0 0 0 0 0 .2 2.3 11,6
162.7 163.1 212.5 225.6 256.6 257.3 268.2 268.2 219.3 211.2 151.0 139.0 2 534,7
↑ Fizahan-tany mpizahatany any New York
↑ Tranombakoka any New York Hotsidihina
↑ Ny valan-javaboary tsara indrindra hitsidika any New York
↑ Nightlife in New York
↑ NowData - NOAA Online Weather Data. National Oceanic and Atmospheric Administration. Retrieved on 2011-12-14.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=New_York&oldid=1012284"
Dernière modification le 2 Jiona 2021, à 23:54
Voaova farany tamin'ny 2 Jiona 2021 amin'ny 23:54 ity pejy ity.